Akụkọ - Oghere oghere, nke a makwaara dị ka nkwọ oghere ma ọ bụ oghere oghere, na-ezo aka na okirikiri okirikiri pụrụ iche maka ịkpụzi oghere okirikiri na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ injinia.
Oghere oghere, nke a makwaara dị ka nkwọ oghere ma ọ bụ oghere oghere, na-ezo aka na okirikiri okirikiri pụrụ iche maka ịkpụzi oghere okirikiri na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ injinia.
Oghere oghere, nke a makwaara dị ka nkwọ oghere ma ọ bụ oghere oghere, na-ezo aka na okirikiri okirikiri pụrụ iche maka ịkpụzi oghere okirikiri na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ injinia. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ, dị mfe iji buru, nchekwa na ọtụtụ ebe. Ọ na-adaba adaba ịkpụcha oghere, oghere oghere, oghere triangular, akara kwụ ọtọ na usoro ọ bụla nke ọla kọpa, ígwè, igwe anaghị agba nchara, plexiglass na efere ndị ọzọ mgbe etinyere ya na igwe eletrik nkịtị.
Dabere na nha okirikiri dị iche iche, ndị na-akụ ihe ọkụkụ nwere oghere na nkọwapụta dị iche iche. N'otu oge ahụ, dịka omimi nke oghere, a na-ekewa ha n'ụdị ọkọlọtọ na ụdị ibu dị omimi. Ha na-arụnyere na electric aka akuakuzinwo, mmetụta akuakuzinwo, rocker akuakuzinwo na ndị ọzọ na electric ngwaọrụ.
E nwere ụdị ọsọ abụọ:ofu na dayameta na-agbanwe (ụdị ụgbọ elu). A na-ejikarị oghere na-agbanwe oghere na-agbanwe agbanwe maka ime ụlọ na n'èzí.
Ofu dayameta oghere opener, e nwere ndị nkịtị ụdị, mmetụta ụdị, mmiri-mma ụdị, nke mmiri-mma ụdị ọtụtụ ndị na-eji maka mgbidi oghere, na elu arụmọrụ na mara mma oghere.
Dị ka nhazi ihe si dị:bi-metal oghere opener / bi-metal oghere hụrụ, sikwuo carbide oghere hụrụ, diamond onu hụrụ. A na-eji ihe dị iche iche ebipụ ihe dị iche iche. Ndị akacha eji eme ihe bụ bimetallic saw. A na-atụ aro carbide simenti maka ihe igwe siri ike, na diamond ka akwadoro maka iko, eriri carbon, seramiiki na ihe ndị ọzọ na-emebi emebi.
Ngwa nke oghere oghere tumadi gụnyere:nkwado ahụ, mmiri, malite ịgba, wdg. nkwado ahụ bụ nke izugbe akụkụ. Oghere ahụ nwere oghere dị iche iche dị iche iche nwere nkọwa abụọ nke nkwado aka. Oghere oghere dị n'etiti 14 na 32 mm bụ otu nkọwapụta, na oghere oghere buru ibu karịa 32 mm bụ otu nkọwapụta.
Ngwa nke oghere hụrụ tumadi:support ahụ, mmiri, malite ịgba, wdg ndị na-akwado ahụ bụ nke izugbe akụkụ. Oghere oghere dị iche iche na oghere dayameta nwere ihe abụọ nkọwa nkwado aka. Oghere oghere dị n'etiti 14 na 32 mm bụ otu nkọwapụta, na oghere oghere buru ibu karịa 32 mm bụ otu nkọwapụta.
Igwe dị elu bụ ụdị ígwè ọrụ ngwaọrụ nwere nnukwu ike, nrụgide dị elu na akwa nguzogide ọkụ. A na-ejikarị ígwè dị elu arụpụta ihe dị mgbagwoju anya na mmetụta ndị na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide ọgwụ, yana nnukwu okpomọkụ na-agba na oyi extrusion na-anwụ n'ihi usoro ọrụ ya dị mma na nchikota nke ike na ike.
Igwe na-agba ọsọ ọsọ ọsọ bụ ụdị oghere mmeghe nke ígwè dị ọsọ ọsọ, nke a na-ejikarị emeghee oghere na efere efere ma ọ bụ ọkpọkọ. Enwere ike iji ya maka oghere ọnọdụ etiti tupu oghere ahụ emeghe, wee jiri oghere bi-metal mepee oghere oghere achọrọ.
Enwere otutu oghere oghere alloy. Ugbu a ahịa na-ekewa n'ime (nkịtị) pụrụ iche mkpa ígwè mpempe akwụkwọ, (bara uru ụdị) pụrụ iche na-emeghe mkpa igwe anaghị agba nchara. (ọkara ọkwa) pụrụ iche na-emeghe anaghị agba nchara. (gradedị ọkwa dị elu) nchara nchara pụrụ iche (nchara efere nwere ike iru karịa 2cm).
Nke abuo: a na-eji oghere oghere bimetallic mepee mpempe akwụkwọ, osisi na efere plastik.
Nke atọ, ojiji nke nnukwu ọsọ ígwè mgbata oghere opener na alloy tapper yiri. Points: nkịtị, ọkara ọkwa, elu ọkwa, full-egweri, ulo oru ọkwa.
N'ikpeazụ, ihe nkedo alloy kwesịrị ekwesị maka efere nchara na ngwa nchara ígwè nchara ígwè kwesịrị ekwesị maka ọkpọkọ ígwè.
6542 nchara igwe dị elu
Atụmatụ: obere vanadium (1%) na ọdịnaya cobalt dị elu (8%). Cobalt na Du nwere ike ime ka ogige carbon mebisịa karịa na matrik ahụ n'oge a na-ekpocha ya na kpo oku, ma jiri ike matrik dị elu mee ka nkwụsi ike nke uwe ahụ ka mma.
Ekweghị ekwe: ụdị a na-agba ọsọ ígwè nwere ezi ekweghị ekwe, kwes ekweghị ekwe, na-eyi ndị na-eguzogide ma na-egweri ikike. Harddị ike nke ọgwụgwọ okpomọkụ nwere ike iru 67-70hrc, mana ụfọdụ usoro ọgwụgwọ ọkụ pụrụ iche iji nweta 67-68hrc ike, nke na-eme ka arụmọrụ mbelata (ọkachasị nkwụsị oge) ma melite mmetụta siri ike.
Ngwa: cobalt nnukwu ọsọ nchara nwere ike n'ime ụdị dị iche iche nke ịcha ngwaọrụ, nke ga-eji na-ebipụ siri ike igwe ihe. N'ihi na nke ọma-egweri arụmọrụ, ọ nwere ike n'ime mgbagwoju ọnwụ ngwaọrụ, nke na ọtụtụ-eji n'ụwa. Otú ọ dị, n'ihi enweghị ego cobalt na China, ọnụahịa nke cobalt dị elu dị elu dị nnọọ elu, nke bụ ihe dịka 5-8 nke nke nnukwu ọsọ ọsọ ọsọ.
Nchedo gburugburu ebe obibi: ihe nchebe gburugburu ebe obibi, enweghị mmetọ.
Post oge: Sep-16-2020